MW Wadanka Zimbabwi Oo Aqbalay Safiirka Wadanka Ethiopia Mudane Mustafe Deeq Cabdisalaam - Cakaara News
MW Wadanka Zimbabwi Oo Aqbalay Safiirka Wadanka Ethiopia Mudane Mustafe Deeq Cabdisalaam
Zimbabwi (Cakaaranews ) Jumce 15ka April 2016, Safiirka JDFI ee loo magacaabay 5ta wadan ee Zimbabwi, Zambia, Mozambique, Angola, iyo mauritius. mudane Mustafe Deeq Cabdisalaanayaa maanta sidiiran loogu soo dhaweeyay magaalada Harare ee xarunta wadanka Zimbabwi. Halakaas oo uu kula kulmay Madaxwaynaha wadanka Zimbabwe mudane Robert Mogabi islamarkaana uu ka aqbalay warqadiisii magacaabista.
Hadaba safiirka Shanta wadan ee Simbaawi, Saambiya, musaambik, Angola iyo Mauritius mudane Mustafe Deeq Cabdisalaan oo ah safiir u dhashay DDSI ayaa sheegay in uu maanta gaadhay caasimada Zimbabwi ee magaalada Harare islamarkaana ay sifiican oo farxadi ku dheehantahay ay usoo dhaweeyeen madaxada wadanka zimbabwi oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha wadanka Zimbabwi mudane Robert Mogabi. Wuxuuna masuulku intaa kudaray in sifiican oo waji furan looga aqbalay waraaqdiisii magacaabista safiirnimo.
Dhinaca kale, wuxuu xusay safiirku in ay madaxda wadanka Zimbabwi ay wada yeesheen kulan islamarkaana ay isla qaateen xoojinta iyo wada shaqaynta xidhiidhka labada wadan sida dhanka kobaca dhaqaalaha, maal gashiga, iyo warshadaha.
Sikastaba ha ahatee waxaa xusid mudan in safiirku uu madaxda wadamada 5ta wadan uu kula kulmay isagoo xidhan dharka dhaqanka bulshada uu ka soojeedo ee DDSI.